Waalidiin lagu maxkamadaynayo gabadhooda oo ay guur ku qasbeen | Somaliska
Nolosha / Sweden
Waalidiin lagu maxkamadaynayo gabadhooda oo ay guur ku qasbeen
Maanta ayaa kiis maxkamadeed oo ku saabsan guurka khasabka ah la furaya. Waa markii ugu horeeysay taariikhda Sweden ee qof lugu soo oogo dacwad noocan oo kale ah.
Kiiskan ayaa ku saabsan gabadh da´yar oo magaalada Landskrona degan oo lugu khasbay in ay guursato nin jooga waddanka Afqaanistaan. Sababta ayaa ah in familiga gabadhani ka soo hor jeedaan xidhiidhka ay la leedahay nin degan Landskrona.
Aabaha, isaga saaxiibkiisi iyo walaalka gabadha ayaa ka mid ah dadka dacwadan lugu soo oogay. Tan ayaa xidhiidh la leh in ay raggaani afduubeen ka dibna jidh dil u geeysteen ninka ay gabadhani la saaxiibtay ee Landskrona degan.
Saddexdan qof ayaa dafirsan dembiga loo haysto.
Kooxda barafka Somalia oo musasal laga sameeyay